चीन सेतो शुद्ध एक्रिलिक वर्ग शावर ट्रे शावर टब, शीर्ष होटल कारखाना र आपूर्तिकर्ताहरु को लागी उपयुक्त | बेले
सेतो शुद्ध एक्रिलिक वर्ग शावर ट्रे शावर टब, शीर्ष होटल को लागी उपयुक्त
सामाग्री: एक्रिलिक, ABS
मात्रा (टुक्रा) १-५० ५१३०० 301-600 > 600००
Est। समय (दिन) 15 25 30 कुराकानी गर्न को लागी
अनुकूलित लोगो (न्यूनतम आदेश: ३० टुक्रा)
अनुकूलित प्याकेजि (्ग (न्यूनतम आदेश: ३० टुक्रा)
ग्राफिक अनुकूलन (न्यूनतम आदेश: ३० टुक्रा)
प्रकार: स्पा टब वारेन्टी:2वर्ष
बिक्री पछि सेवा: हो परियोजना समाधान क्षमता: हो
आवेदन: होटल/अपार्टमेन्ट डिजाइन शैली: परम्परागत
मोडेल नम्बर: BS0012853 शैली: परम्परागत
सामाग्री: एक्रिलिक, ABS प्रमाणीकरण: सीई प्रमाणीकरण
रंग: सेतो आकार: /०/ 80०/c ० सेमी
आकार: वर्ग प्याकेज: 1pc/गत्ते का डिब्बा
नाम: नुहाउने आधार
प्रति महिना १००० टुक्रा/टुक्रा
शावर कम ट्रे पहिलो बबल फिल्म मा लपेटिएको, तब मोटी कार्टन बक्स मा। 40HQ 800PCS को आसपास लोड गर्न सक्नुहुन्छ
विरोधी स्किड र लगाउने प्रतिरोधी, बाध्यकारी खुट्टा बिना
दुई वयस्क यसमा उभिएका छन्
हल्का वजन, परिवर्तनशील आकार र राम्रो सतह फिनिश। के यो रंग धेरै थर्मल इन्सुलेशन प्रभाव हुनुपर्छ जोड्दछ। एक्रिलिक बाथटब को थर्मल इन्सुलेशन प्रभाव राम्रो छ, जो एक लामो समय को लागी पानी को तापमान शांत राख्न सक्छ
A: हो। हाम्रो कारखाना Wuhu मा स्थित छ यो नजिकैको शंघाई र हांग्जो छ। हाम्रो कारखाना भ्रमण गर्न स्वागत छ यदि तपाइँको समय अनुमति छ।
नुहाउने कोठा को शावर ट्रे कसरी छनौट गर्ने?
हालैका वर्षहरुमा स्वस्थ र फैशनेबल जीवन को एक प्रतिनिधि शब्दहरु को रूप मा, स्नान कोठा मानिसहरुको जीवन मा एक धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। यो मात्र एक स्वतन्त्र स्नान ठाउँ विभाजित गर्न सक्दैन। नुहाउने कोठा संग, जब नुहाउन को लागी नुहाउने टाउको को उपयोग, पानी बाहिर स्प्ल्याश र पूरै बाथरूम को भुइँ गीला हुनेछैन। यो पनि जाडो मा न्यानो राख्न सक्नुहुन्छ, धनी आकार र उज्यालो रंग संग, नुहाउने समारोह को अतिरिक्त, यो पनि एक राम्रो सजावट हो। तर नुहाउने कोठा हरेक परिवार को लागी उपयुक्त छैन। यदि यो उपयुक्त छ, पनी हरेक परिवार किन्न र यसलाई स्थापित गर्न बर्दाश्त गर्न सक्दैन। जे होस्, स्वास्थ्य र स्वच्छता को परिप्रेक्ष्य बाट, हामी राम्रो संग बाथ गर्ने ठाउँ बाहिर बाट छुट्ट्याउँछौं, जो न केवल हामी बाथरूम को सफाई को संख्या घटाउँछ, तर हाम्रो जीवन लाई स्वस्थ बनाउँछ।
त्यसोभए, नुहाउने कोठा र पर्दा बाहेक, हामी कुनै विकल्प छ? हो, त्यो एकल बाथरूम को शावर ट्रे हो। यद्यपि यो स्नान कोठा संग संगै स्थापित गर्न को लागी सुन्दर छ, एकल स्थापना र सुन्दर स्नान पर्दा पनि साधारण परिवारहरु को लागी एक राम्रो विकल्प हो।
स्नान कोठा को शावर ट्रे चयन: स्नान कोठा दुई प्रकार मा विभाजित छ: उच्च बेसिन र कम बेसिन। ट्या tank्क प्रकार मानिसहरु बस्न सक्छन्। यो वृद्ध वा बच्चाहरु संग परिवार को लागी उपयुक्त छ। यो धेरै लुगा धुने र पानी को भण्डारण को रूप मा धेरै उद्देश्यहरु को लागी प्रयोग गर्न सकिन्छ। बेफाइदा यो हो कि यो सरसफाइ को लागी समस्या हो। यसको विपरीत, छोटो बेसिन सरल छ र मूल्य उच्च बेसिन भन्दा कम छ।
यसको अतिरिक्त, हामी सफा गर्न को लागी र दुर्गन्ध को रोकथाम को लागी हटाने योग्य साइड प्लेट संग शावर ट्रे छनौट गर्नुपर्छ।
1, उपस्थिति चयन: उपस्थिति आकार पहिले आफ्नो बाथरूम ठाउँ को लेआउट अनुरूप हुनुपर्छ, खाता वरपरका बाधाहरु लाई लिनुहोस्, र त्यसपछि छनौट तपाइँलाई मनपर्छ।
2, उचाइ को चयन: कम स्नान ट्रे स्नान कोठा को लागी अधिक उपयुक्त छ। उच्च स्नान ट्रे अलग स्थापित छ। जब एकल स्नान ट्रे चयन, गहिरो सिंक संग एक ध्यान दिनुहोस्।
3, खाली र ठोस स्नान ट्रे को विकल्प: ठोस स्नान ट्रे सीधै जमीन संग जोडिएको छ। यो सामान्यतया थर्मल इन्सुलेशन प्रकार्य संग विशेष सामाग्री अपनाउँछ।
यो सिफारिश गरीएको छ कि साथीहरु जो सजाइएको छ ठोस स्नान ट्रे छनौट नगर्नुहोस्, किनकि ठोस शावर ट्रे को निकासी समायोज्य छैन; खोक्रो स्नान कोठा नुहाउने ट्रे सजाइएको घर मा लागू गर्न सकिन्छ, र जमीन बाट उचाई स्वतन्त्र रूप बाट समायोजित गर्न सकिन्छ। यो डिजाइन नुहाउने ट्रे सुक्खा र सफा बनाउँछ।
अघिल्लो: लक्जरी स्लाइडिंग ढोका शावर कोठा शीर्ष बत्ती र नुहाउने संग
अर्को: २०२१ चीन कारखाना बाथरूम स्कर्ट संग एक्रिलिक सरल एप्रन बाथटब भिजाउने
एक्रिलिक बाथटब र शावर
एक्रिलिक बाथटब शावर
एक्रिलिक बाथटब शावर संलग्नक
एक्रिलिक बाथटब शावर एकाइहरु
शावर संग बाथटब
व्हर्लपूल बाथटब र शावर कम्बो
व्हर्लपूल बाथटब शावर
व्हर्लपूल बाथटब शावर कम्बो
प्लास्टिक धुने white००mm de शुद्ध सेतो क्षेत्र ड्रप ...